Meeshaaleen baqassanii yaaluu fi dawaaleen kaansarii fi kalee Birrii biiliyoona 16n bitaman dhaabbilee yaalatiif kennamaniiru – Fana Broadcasting Corporate
Meeshaaleen baqassanii yaaluu fi dawaaleen kaansarii fi kalee Birrii biiliyoona 16n bitaman dhaabbilee yaalatiif kennamaniiru
Finfinnee, Hagayya 5,2010(FBC)- Meeshaaleen baqassanii yaaluu fi dawaaleen kaansarii fi kalee Birrii biiliyoona 16n bitaman dhaabbilee yaalatiif kennamuu Eejansiin Fandii fi Dhiyeessii Dawaalee beeksise.
Fedhiin dawaalee fi meeshaalee yaalaarra jiruu fi dhiyeessiirra jiru akka biyyaattuu kan wal hin gitin ta’uu eejansichi ni hima.
Daayreektarri olaanaa Eejansii Fandii fi Dhiyeessii Dawaalee Dooktar Lookoo Abrahaam akka jedhanitti bara baajata darbeetti hojii misooma fayyaa dhiyeessii dawaalee fi meeshaalee yaalaarratti hojjetameen, Birrii biiliyoona 16n bitamee raabsamuu eeraniiru.
Carallaa yaala kaansarii fi baqassanii yaaluu fi bakka buusuu kaleetif dawaalee fi meeshaaleen bitamanis dhaabbilee yaalaa addaddaaf raabsamuu daayreektarichi himaniiru.
Dawaaleen naannolee hongeen itti mudateef barbaachisanii fi tajaajila baankii dhiigatiif oolanis raabsamaniiru.
Dhiyeessii fi fedhii dawaalee fi meeshaalee yaalaarratti garuu akkuma biyyaattuu sadarkaa barbaadamerra akka hin ga’in Dooktar Lookon ni himu.
Hariiroo Ummattoota Ityoophiyaa fi Keeniyaa cimsuuf xiyyeeffannoon ni hojjetama…